Shiinaha Steam Iyo Rotary Retort warshad iyo soosaarayaasha | Dingtaisheng
Ku rid sheyga dib-u-celinta jeermiska dhalmada, dhululubo ayaa shaqsi ahaan loo cadaadiyo oo albaabka ka xidho Albaabka jawaab celinta waxaa lagu xaqiijinayaa iyadoo la ilaalinayo seddex geesood oo nabadgelyo ah. Dhamaan howsha oo dhan, albaabku si farsamaysan ayuu u xiran yahay.
Biyaha kulul waxaa lagu durayaa dib u soo celinta iyada oo loo marayo haanta biyaha kulul, hawo qabow oo ku jirta soo celinta ayaa la daad gureynayaa, ka dibna uumiga ayaa lagu durayaa qaybta kore ee dib u celinta, marinka uumiga iyo bullaacaddu waa la iswaafajinayaa, iyo booska ku jira dib u celinta waxaa ka buuxsama uumiga. Ka dib marka la soo daayo dhammaan biyaha kulul, wuxuu sii wadaa kuleylka si loo gaaro heerkulka nadiifinta. Ma jiro meel qabow dhammaan nidaamka nadiifinta. Ka dib marka la gaaro waqtiga nadiifinta, biyo qaboojinta ayaa soo galay iyo marxaladda qaboojinta ayaa bilaabmaya, cadaadiska ku jira dib-u-celinta ayaa si macquul ah loo xakameynayaa inta lagu jiro marxaladda qaboojinta si loo hubiyo in daasadaha aan la beddeli doonin sababtoo ah farqiga u dhexeeya cadaadiska gudaha iyo dibedda.
Marxaladda kululeynta iyo haynta, cadaadiska ku-soo-celinta waxaa gebi ahaanba soo saaray cadaadiska dhererka uumiga. Marka heerkulku hoos u dhaco, cadaadiska miisaanka ayaa la soo saaraa si loo hubiyo in baakada alaabtu aysan xumaan doonin.
Inta lagu jiro howsha oo dhan, xawaaraha wareegga iyo waqtiga jirka wareegaya waxaa lagu go'aamiyaa habka nadiifinta ee sheyga.
Qaybinta kuleylka labiska ah
Adoo ka saaraaya hawada markabka soo celinta, ujeeddada ka-nadiifinta uumiga ka dhalata waa la gaaraa. Sidaa darteed, dhamaadka wajiga hawo soo-baxa, heerkulka markabka wuxuu gaaraa xaalad aad u labisan.
Fudud oo lagu kalsoonaan karo
Marka la barbar dhigo noocyada kale ee jeermiska la iska dhigo, ma jiro qalab kululeyn kale oo soo-baxa iyo weji-nadiifinta ah, sidaa darteed uumiga oo keliya ayaa u baahan in la xakameeyo si loo sameeyo qaybo ka mid ah alaabooyinka oo is-waafaqsan. FDA waxay si faahfaahsan u sharaxday naqshadeynta iyo howlgalka uumiga uumiga, iyo kaneryo badan oo duug ah ayaa adeegsanayay, marka macaamiisha way yaqaaniin mabda'a shaqada ee nooca retort-ka, taasoo ka dhigeysa noocaan soocelinta inay u fududahay isticmaaleyaashii hore inay aqbalaan.
Nidaamka wareega wuxuu leeyahay qaab dhismeed fudud iyo waxqabad xasiloon
> Qaabdhismeedka meertada ah ayaa loo shaqeeyaa loona sameeyaa markiiba, ka dibna daaweyn isku dheellitiran ayaa loo sameeyaa si loo hubiyo xasilloonida wareegga
> Nidaamka gawaarida ayaa adeegsanaya farsamo dibadeed gebi ahaanba howsha. Qaab dhismeedku waa mid fudud, fudud in la ilaaliyo, oo si weyn u dheereeya nolosha adeegga.
> Nidaamka riixaya wuxuu qaataa dhululubada laba-geesoodka ah si otomaatig ah loo qaybiyo loona isu-dhejiyo, qaabdhismeedka hagistana waxaa lagu adkeeyay in lagu dheereeyo nolosha adeegga silsiladda.
Ereyga: Rotary retort, retort, Khadka wax soo saarka jeermiska
Rin Cabitaanno (protein qudaar, shaah, kafee)
Products Waxyaalaha caanaha laga sameeyo
＞ Khudaarta iyo miraha (boqoshaada, khudradda, digirta)
Food Cunnooyinka carruurta
Meals Cunnooyinka diyaarka u ah in la cuno, Boorash
Food Cunnada xayawaanka
Hore: Quusitaanka Biyaha Iyo Soo Celinta Rotary
Xiga: Nidaamka Dib-u-Celinta ee aan toosnayn
Steam Rotary Aargudasho
Bixinta Rotary Immersion Quater